Ihlabathi leAbraxas leeAmulets ® Magic ▷ Talismans ▷ Izikhuseli zomlingo-Iphepha 22
Amava oMthengi kunye noLungelelwaniso lweLucifer
Amava obuqu omvavanyi we-beta MS kunye nokuqaliswa kukaLucifer
Luluphi ulungelelwaniso loMoya olufumeneyo? : Lusifa
Kunini uvavanya lo Moya : iintsuku ezisi-7
Emva kweentsuku ezingaphi uye wabona utshintsho? : Usuku lokuqala lokusetyenziswa
Uphawule ntoni? : Ukucocwa kokuqala kwengqondo okulandelwa yimvakalelo ephakamileyo yokuqonda ehamba nemvakalelo eyongeziweyo yamandla emzimbeni nasengqondweni.
Ingathi ndilungiselela into esezakwenzeka. Ndifumana amaphupha acace kakhulu ngobusuku ngabunye kwaye abonakala ngathi akha into ethile. Ndacinga ukuba ndiqale ukuva ilizwi ngobunye ubusuku kodwa andakwazi ukwenza amagama ahlukileyo ngeli xesha.
Ngaba uMoya unxibelelene nawe? : Hayi
Ngaba uMoya ukunike izalathisi ezithile? : Hayi
Luhlobo luni lwemiyalelo owakunika lona umoya? : Akhonto okwangoku kodwa, ndicinga ukuba oku kuzakwenzeka kungekudala.
Wabonakala ukwimeko enjani umoya? : Akukho mbonakalo okwangoku.
Ngaba wenze umnqweno emva kweentsuku ezingama-21? : Hayi
Ngaba uMoya ukunike oko kunqwenelwayo? : Hayi
Iinkcukacha ezithe vetshe : Kuphela kwiveki yokuqala ngoko ke lo mbuzo ungasentla awukasebenzi okwangoku
Iveki yesi-2 funda apha
Amava oMthengi kunye noLungelelwaniso lweAstaroth
U-DK wase-Austria uxela amava akhe ngamandla e-Astaroth:
Emva kweentsuku ezingaphi uye wabona utshintsho? : usuku olu-1
Uphawule ntoni? : Udade wethu ohlala kude kwaye akazange adibane nam okanye umama, uye wasondela kuthi. Okokuqala, waqhagamshelana nam waza wandimemela kwiHalloween ukuba ndiye endlwini yakhe, wenza itheko. Emva koko, waqhagamshelana nomama waza wancokola ixesha elide naye. Ngoku, ufowunela umama wam yonke imihla kwaye umama wonwabile ngokwenene, ukuba nentombi yakhe iphile kwakhona. Kwiintsuku ezi-3 kamva, ndafumana ulwazi malunga nesithandwa sam, endingazange ndiyazi ngaye. Ndaye ndaba nokuqonda ngembali yosapho lwakhe nendlela ezinye izinto eziye zenzeka ngayo ngokwenene. Ndikwafumene ulwazi malunga nezinye izinto, ezibaluleke kakhulu, ukuqondwa nokuqonda. UAstaroth undinike ulwazi malunga nexesha lam elidlulileyo kunye nekamva lam kwaye wandinika ithuba, ukuba ndithethe nodadewethu kwakhona. Ndaye ndambona emaphupheni wam ndeva ilizwi lakhe lisebeza, ukuba mandenze ntoni.
Ngaba uMoya ukunxibelelana nawe? : Ewe
Ngaba uMoya ukunike izikhombisi ezithile? : Ewe
Luhlobo luni lwemiyalelo owakunika lona umoya? : Wathi mandivuleleke ndifumane imiyalezo emalunga nezinto ezithile, bendingasoze ndikholelwe ngaphambili. Wandixelela ukuba ndiye komnye wentsapho yomfana endandithandana naye ukuze ndifunde inyaniso ngaye.
Wabonakala ukwimeko enjani umoya? : Wayenentloko yengcuka nomqolo wenyoka wandindwendwela ebusuku ebhedini yam.
Ngaba wenze umnqweno? : Ewe
Ngaba unikwe nguMoya oko unqwenelayo? : Ewe
Ezinye iinkcukacha : Bendinqwenela ukuba usisi aphinde afikelele kumama kwaye kwenzekile. Nam ndandifuna ukwazi inyani ngomfana wam. Konke ukuqaliswa kwethu akukho mngcipheko. Zonke zivavanywa ziinkosi ezi-5, iqela lethu labavavanyi be-beta abali-10 kunye nabavavanyi abangamavolontiya abangaphezu kwe-120 abavela kwihlabathi liphela. Awuyi kwenza naziphi na izivumelwano, akufuneki unikeze umphefumlo wakho okanye nantoni na enjalo. Uya kukhululeka ukuba ube namava kwaye usebenzise amandla alo moya.
Funda ngakumbi apha
Amava amaninzi omsebenzisi anemimoya eyahlukeneyo